Ulwazi oluyisisekelo lokuphrinta izincwadi-iBlog-Book Printing China
Ulwazi oluyisisekelo lokuphrinta izincwadi
isikhathi: 2020-11-27 Okuhamba phambili kwe-: 8
1. Okwe-offset umshini wokuphrinta ukuphrinta eChina, okokuqala nje, kufanele wazi usayizi wephepha leshidi. Usayizi ojwayelekile wephepha lephepha uhlukaniswe ngosayizi omkhulu nosayizi omuhle. Usayizi ogcwele weshidi ngu-119cm * 89cm (47 inches * 35 inches). Ukusika amashidi amabili kubizwa ngokuthi ukuvulwa kwesigamu, ukusika amashidi amane kubizwa ngokuthi ukuvula ezine, ukusika amashidi ayisishiyagalombili kubizwa ngokuthi ukuvula okuyisishiyagalombili (A3), nokusika 16 amashidi ngu 16cmkuvulwa (A4). Usaamayintshiphelele wephepha elijwayelekile yi-108CM * 78cm (43 inches * 31 inches), futhi amashidi amabili afanayo asesimweni sokubheka okuhle nokunye. ngokuvamile, umshini ongu-1cm kufanele ushiywe ukuluma ukulunywa kwephepha nerejista yomugqa wesiphambano engu-0.5cm ezinhlangothini zombili. Kunjalo, Ngithatha iwebhu ngokususelwa, ngakho-ke ingaguqulwa ibe ngamamitha ayisikwele.
2. Iphepha nokuphrinta: iphepha ngokuvamile lihlukaniswe ngephepha lokunyathelisa le-offset, njengephepha elijwayelekile lokukopisha nephepha lokubhala; iphepha eliboshwe, iphepha le-matte, ukushuba okungaphezulu kwama-200g kubizwa ngekhadi, njengekhadi lethusi, iningi lalo lisetshenziselwa ama-albhamu ezithombe namashidi ombala wokukhangisa; iphepha lebhodi elimhlophe, amakhadibhodi amhlophe, iningi lalo lisetshenziselwa ukupakisha ibhokisi; kukhona iphepha lekhophi elinekhabhoni, iphepha lokuzihlanganisa, iphepha le-sulfuric acid, iphepha elikhethekile, kanye nephepha lekhadibhodi Iphepha leCore, Kraft iphepha, njll. Sengisho nje, 157Iphepha eliboshwe ngo-G lisho ukuthi ukushuba kwalolu hlobo lwephepha elihlanganisiwe 157 amagremu ngemitha eyisikwele. Kukhula inani lamagremu, iphepha liyajiya. Ekuphrinteni, kuyisiko ukushaya ucingo 500 amaphepha 1 Ling iphepha. Intengo yephepha isuselwa kumathani. Ama-oda ngethani ngalinye lephepha elinosayizi ohlukahlukene wamagremu ahlukile. Kukhona itafula lokukhomba.
Sengisho nje, le ukuphrinta izincwadi ikhwalithi incike ekutheni kukhona ukubhaliswa, ngabe inethiwekhi yokuphrinta iqinile futhi icacile, noma ngabe iphepha lekhasi lisikiwe yini futhi liklwebhiwe, noma ngabe ulayini wokusika uprintiwe, ngabe abalingiswa baphukile, nokuthi umbala uyafana yini. Uma kukhona ishidi lesampula, hlola ukutholwa kobufakazi. Imali yokucubungula imvamisa ibalwa ngoku-oda kombala, leyo, kuprintwa i-oda elilodwa lombala ku-ream ngayinye yephepha.
3. Ngemuva kokuphrinta: izinqubo zokucutshungulwa kokucindezela okubandakanya ifilimu elihlanganisiwe, ifilimu eliyisimungulu, bronzing, oiling, UV, ukusonga, ukubopha ihhashi, ukuthunga ukubopha iglue, indenti die ukusika, i-tile enhle e-corrugating, njll.
Kukhona nokupakisha, ukulethwa, iqoqo njalonjalo. Generally, sidinga ukukhokha ngaphambi kwesikhathi lapho sisayina inkontileka lapho sitngokuvamileizinisi. Normally, Ikona 50% ngaphambili, ngoba okuqukethwe kwendaba ephrintiwe kucacisiwe futhi kungokwalolu khasimende kuphela. If he doesn't want it, abanye ngeke bayisebenzise.
Okwangaphambilini Ikhasi : Ulwazi lokuphrinta incwadi - uyinki
Ikhasi Elilandelayo : Izindlela ezejwayelekile zazisebenzisa ukuphrinta eChina